Voadika ny 12 Novambra 2018 8:58 GMT
Tsy vokatra nomena ho an'ny tontolo Arabo ny fahalalaham-pitenenana, saingy misy ve rivotry ny fiovana? Naseem Tarawneh mitatitra ny drafitra hanomboka “Kianjan'ny Fahalalahana” ao Amman mba ahafahan'ny olom-pirenena miteny malalaka saingy mbola misalasala izy; “Amman dia tanànam-paribolana ary ny kianja dia endrika tsy voafaritra hampidirina ao anatin'ny tontolo ara-sosialy sy ara-politika … Tetidratsy fotsiny ve izany, alonalona hafa momba ny fahalalahana ara-politika?”
Ady Israeliana / Palestiniana
Haitham Sabbah, mandritra izany fotoana izany, miresaka lohahevitra mampiady hevitra sy saropady amin'ny endrika vaovao – Palestiniana sy Israeliana, ary manomboka adihevitra lava momba izany. Ny famintinan'i Haitham; “Nanapa-kevitra handroso, hahafantatra, hiasa sy hampianatra ny zanako ny fomba hananganana tetezana, fa tsy ny fomba handravana azy ireo aho.”
Hala avy ao amin'ny Café Lulu, etsy ankilany, miteny hoe, Ahoana no fomba hanangananao firenena iray, raha toa ka voafetra be tahaka izao ny sisintaninao“, raha tsy mba voaaro mihitsy ianao amin'ny tsy fivadihana sy ny fahamasinan'ny faritra an'habakabakao, sy ny tany?”
Ny fitovian'ny lahy sy ny vavy sy ny sazy farany ambony indrindra
Promises manoritsoritra ny fahagagany amin'ny fihainoana namana akaiky milaza ny vehivavy ho toy ny “fakan'ny ratsy rehetra”. Ao amin'ny lahatsoratra dia manontany tena izy hoe “Tena heverinao ve fa ny vehivavy no antony mahatonga ny ratsy rehetra eo amin'ny fiarahamonina? Moa ve isika amin'ny maha-vehivavy no mahazo tsiny noho ny zava-mitranga amin'izao tontolo izao?” Ity fanontaniana ity dia mitarika adihevitra mahaliana, amin'ny filazana ny fiandohan'ny fahotana, ny toetrany marina manoloana ny tontolo anjakan'ny lehilahy sy ny vono olona noho ny voninahitra.
Miantso an'i Jordania ny ‘Human Rights Watch’ mba hanafoana ny fanamelohana ho faty. Natasha ao amin'ny Mental Mayhem maneho ny fihetsehem-pony momba ny lohahevitra: “Amin'ny maha-olona manohitra mafy ny sazy farany ambony ahy, dia tena manantena aho fa i Jordania no ho anisan'ny firenena voalohany ao amin'ny Tontolo Arabo hanafoana ity fanao ity.” Mitovy hevitra i Issam Smeir ao amin'ny Shifaa: “Koa, Inona no azon'izao tontolo izao omaly amin'ny fanafoanana aina iray ary inona no tena dika lojika ao ambadiky ny fanamelohana ho faty?”